Home » သတင်း » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အန်ဒီ Birkinshaw အတူ Calrec ကိုထပ်တိုးအရောင်းရောကျ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အန်ဒီ Birkinshaw အတူ Calrec ကိုထပ်တိုးအရောင်းရောကျ
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်, မေ 13, 2019 — Calrec has announced Andy Birkinshaw as International Sales Manager, effective immediately. Birkinshaw joins the global sales team at Calrec headquarters and is managing broadcast sales in the UK, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Norway and Sweden. His goal is to help Calrec establish these exciting markets and to grow the overall Calrec business.
အေျကာင္းအရာ Calrec အသံ Ltd. ,
Calrec အသံ သီးသန့် On-လေထုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဖော်စပ်အသံအတွက်ထူးချွန်ထံအပ်နှံသည်။ 50 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက်တစ်ဦးကထုတ်လွှင့်အထူးကု, Calrec ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အပေါ်မှီခိုဒစ်ဂျစ်တယ် consoles စတဲ့အကွာအဝေးတီထွင်ခဲ့သည်။ ပို. ပို. consoles စချက်နဲ့ Workflows, shareable အရင်းအမြစ်များနှင့်လွယ်ကူစွာချဲ့ထွင်ခံရဖို့စွမ်းရည်မှမြင့်တက်ပေးခြင်း, တစ်ဦးစက်ရုံ-ကျယ်ပြန့်ကွန်ရက်များပေါ်တွင်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ အလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. , Calrec ထုတ်လွှင့်သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများထဲကနေ သာ. ကွီးမွတျတနျဖိုးအရခွင့်ပြုဘူးသောဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးထားသည်။ ပရီမီယံအသံဖြေရှင်းချက်များအတွက်ထုတ်လွှင့် Calrec အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုထားတော်မူ၏။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် calrec.com.
လိုက် Calrec အသံ:
IBC 503 မှာမာရှယ်အီလက်ထရောနစ်စျေးသစ် CV2019-WP - သြဂုတ်လ 22, 2019
ဘယ်လို Calrec '' Assist 'နှင့် IBC 2019 မှာ' 'ချိတ်ဆက်ပါ' နိုငျ - သြဂုတ်လ 22, 2019
နယူး DPA 2028 ဆိုသံ Mic တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်အခင်းအကျင်းကိုပြောင်းလဲရည်ရွယ် - သြဂုတ်လ 22, 2019
အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Calrec အသံ ဥရောပ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-13
ယခင်: မြက်ချိုင့် EDIUS ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနဲ့အတူ Ultimate Editing Functions ဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့် Pix ဗဟို / တောင်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် Rhett Mappin ကြိုဆို